Global Voices teny Malagasy » Lahatsary: Sary manao ahoana no hanokatra ny masonao hiaro ny zon’olombelona? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Desambra 2008 22:10 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika Andriamifidisoa Zo
Hankalazaina amin'ny 10 desambara ho avy izao ny faha_60 taona ny fanambarana ny zon'olombelona, ary ny ekipan'i Witness’   The Hub  dia nametraka lahatsary iray hamaliana ny fanontaniana: Sary manao ahoana no hanokatra ny masonao hiaro ny zon'olombelona? Efa aty amin'ny serasera moa amin'izao fotoana izao ny lahatsary (hataoko hoe Volongana)  ka amin'izy ity dia manasa antsika izy ireo handray anjara amin'ny alalan'ny fanehoana sy fitenenana amin'izao tontolo izao ny herin'ny sary mahatonga antsika hifantoka amin'ny resaka zon'olombelona.
Ny sary ampiasaina amin'ny lahatsarin'izy ireo moa dia avy amin'ny tahirintsarin'i Witness’ The Hub avokoa, sehatra iray ahafahana misintona lahatsary mikasika ny zon'olombelona. Ato amin'ity raki-kira fohy ity dia avoitra  ny fanimbazimbana ny zon'olombelona mitranga any Afghanistan, Argentina, Brazil, Burma, Repoblika Demaokratikan'i Kongo, Repoblika Tsetsenina any Rosia, Philippines ary Sodan andrefana.
Misokatra ho an'ny rehetra ny famaliana ny fanontaniana, ka ireto no fomba azo hamaliana izany:
1) Mamaly amin'ny lahatsary ao amin'ny Hub 
2) mamaly amin'ny soratra (mamela hafatra amin'ny bolongany )
3) Mamaly amin'ny lahatsary ao amin'ny YouTube 
4) Miditra mikambana ao amin'ny vondrona misy azy ao amin'ny Facebook 
5) Bolongana & Volongana (bolongana mamoaka lahatsary)!
Azo ijerena ny tetikasan'i The Hub ny takelaka ho an'ny mpikambana  sy ny bolongan-dry zareo . Arahabaina ho tonga soa avokoa ny fiteny rehetra, ary hiezaka araka izay tratrany izy ireo handika ny valinteny rehetra, ka raha tianao, dia afaka manampy azy ireo koa ianao handika teny ny votoatiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/07/1417/
 aty amin'ny serasera moa amin'izao fotoana izao ny lahatsary (hataoko hoe Volongana): http://hub.witness.org/UDHR60
 ao amin'ny Hub: http://hub.witness.org/share/upload/content